ByteDance က ဂျပန် မှာ ရုပ်ပြ App မိတ်ဆက် - Pandaily
ByteDance က ဂျပန် မှာ ရုပ်ပြ App မိတ်ဆက်
Feb 23, 2022, 20:38ညနေ 2022/02/23 23:05:09 Pandaily
နည်းပညာ ဂြိုဟ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က Bytedance သည် FizzoToon ကို ဂျပန် နိုင်ငံတွင် ကာတွန်း ပလက်ဖောင်း ပေါ်တွင် နေရာချ ထားသည့် အက် ပလီကေးရှင်း တစ်ခု စတင် ခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ် ချက်သည် နိုင်ငံ၏ ကျယ်ပြန့်သော anime ယဉ်ကျေး မှုကြောင့် ၎င်းကို လွယ်ကူသော ရွေးချယ်မှု ဖြစ်စေသည်။
ဤ ပလက်ဖောင်း မှတစ်ဆင့် ရုပ်ပြ အသစ် များနှင့် ပုံပြင် များကို အနည်းဆုံး တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် မွမ်းမံ သည်။ အဆိုပါ ပလက်ဖောင်း ထိုကဲ့သို့သော ဒဏ္ my ာရီ, အချစ် ဇာတ်လမ်း, မှော် နှင့် သူရဲကောင်း အဖြစ် ရုပ်ပြ အမျိုးအစား တစ် ဒါဇင် ကျော် ဖုံးလွှမ်း ။
ယခုအချိန်အထိ အကြံပြု ထားသည့် ကာတွန်း များမှာ “Gentleman vs. Bobcats” ၊ “Master နှင့် သူမ၏ ချစ်သူ ခုနစ် ယောက်” နှင့် “Bamboo Tianji” တို့ဖြစ်သည်။ တရုတ် ဂန္ထဝင် ကာတွန်း များမှ နတ်ဆိုး ပုံပြင် များလည်း လူကြိုက် များသည်။
Bytedance သည် မကြာသေးမီက ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းတွင် အကြီးအကျယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင် Leyinghui (Shanghai) Culture Media Co., Ltd. နှင့် ရုပ်ပြ ပလက်ဖောင်း ပ ဟေ pိဆန် သည့် ပြဇာတ်ရုံ လက်မှတ် အရောင်း ပလက်ဖောင်း ကိုလည်း ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ယခုတွင် ၎င်းသည် ဂိမ်း များ၊ တေး ဂီ တ၊ ရုပ်ရှင် နှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ၊ ရုပ်ပြ ၊ အလတ်စား ဗီဒီယို ၊ သတင်းနှင့် ဝတ္ထု များကို ပေါင်းစပ်ထားသော ဖျော်ဖြေရေး ကွန်ယက် ၏အခြေခံ အကြမ်းဖျင်း ရှိသည်။
Bytedance သည် ပြည်ပ ဖျော်ဖြေရေး နယ်ပယ် သို့ ၀ င်ရောက် ရန်လည်း ကြိုးစား နေသည်။ ဂျပန် နိုင်ငံတွင် FizzoToon စတင် ခြင်းအပြင် Bytedance သည် Fizzo နှင့် Mytopia ကဲ့သို့သော ဝတ္ထု ဖတ် သည့် အက် ပလီကေးရှင်း များကိုလည်း မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သည် အက်ပ် နှစ် ခုက ပြည်တွင်းမှာ Bytedance ရဲ့ အခမဲ့ e-book အက်ပ် ဖြစ်တဲ့ Fanche Novel နဲ့ မ ကွာ ပေမယ့် ဥရောပ ၊ အမေရိက နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ က အွန်လိုင်း စာပေ ဈေးကွက်ကို ရည်ရွယ် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီ စာဖတ် ခြင်း ပလက်ဖောင်း တွေဟာ ပြည်ပ စာရေးဆရာ တွေကိုလည်း စုဆောင်း ပြီး ထူးချွန် တဲ့ ဝတ္ထု ရေး သူတွေအတွက် ရက်ရော တဲ့ ဆု တွေကို ကြေငြာ ခဲ့တယ်။
IResearch Consulting ၏ “၂၀၂၀ ခုနှစ် တရုတ် အွန်လိုင်း စာပေ ပြည်ပ စွမ်းဆောင်ရည် အစီရင်ခံစာ” က တရုတ် အွန်လိုင်း စာပေနှင့် nbsp ၊ ပြည်ပ သုံးစွဲသူ ဦး ရေသည် ၃၁. ၉ ၃၅ သန်း သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ပြည်ပ စျေးကွက် ၏အရွယ်အစား မှာ ယွမ်သန်း ၄ ၆၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၂. ၄ သန်း) အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဤ ပြည်ပ သုံးစွဲ သူများ၏ ၉၁% ကျော် သည်တရုတ် စာပေ များကို နေ့စဉ် နီးပါး ဖတ်ရှု ကြပြီး ပျမ်းမျှ စာဖတ် ချိန်မှာ ၁၁၇ မိနစ် ဖြစ်သည်။ ပြည်ပ သုံးစွဲ သူများ၏ ၈၇. ၁% သည် အွန်လိုင်း တရုတ် စာပေ များအတွက် ငွေပေးချေ လို ကြသည်။